Zilolonge, qubha, ufudumale kwi-sauna - I-Airbnb
Zilolonge, qubha, ufudumale kwi-sauna
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRobin
Igumbi elinesango lakho lokungena, i-sauna kunye negumbi lokuhlambela. I-Kingbed enomandlalo we-memoryfoam kunye nebhedi eyongezelelweyo enye enomgangatho ophantsi okhoyo (kuphela yabantwana). Ukufikelela kwindawo yokupaka yasimahla, i-minibar, indawo yokuzivocavoca kunye ne-wifi. Idama livulekile kwaye lishushu ngoJuni-Agasti. I-pool kunye ne-gym yabelwana nathi sihlala endlwini.
Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya kwi-busstop kunye noqhagamshelo olusondeleyo kwi-Örebro City kunye neZiko lokuthenga iMarieberg. Ukuhamba umgama ukuya epizzeria kunye neGolf Club, apho iyindawo yokutyela eneziselo ezinxilisayo.
Umnyango wegumbi udlula igaraji yethu apho ufumana indawo yokuzivocavoca. Ixhotyiswe ngeebhayisekile ezimbini ezijikelezayo, i-bench press, ii-kettlebells kunye neqela lobunzima.
Egadini uya kudibana nenja yethu ethandekayo ebizwa ngokuba yiBacon. Uyabathanda nyani abantu so mnike i hug and you will make his day. Ukuba uyoyika izinja, nceda usazise ukuze sikwazi ukumgcina kude nawe.
Isidlo sakusasa siyafumaneka ngexabiso elongezelelweyo.
Indawo epholileyo yevilla ekufutshane nazo zonke iimfuno eziyimfuneko.
Familj med två barn som hyr ut vår gästsvit. Hos oss bor också hunden Bacon som gladeligen hälsar er välkomna, det är världens mest sociala hund.
Mna nosapho lwam siqhele ukuba sekhaya sikwazi ukukunceda ngento onokuyidinga. Ngaphandle koko siya kufumaneka ngefowuni, i-sms okanye i-imeyile.